Kuenzana muChirwere Kuwana neWorld Tourism Magamba Ari Kubhadhara
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuenzana muChirwere Kuwana neWorld Tourism Magamba Ari Kubhadhara
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Wtn
Kusalingana mukuwana mushonga we COVID-19 kunogona kutadzisa budiriro yezvehupfumi mumatunhu ese. Saudi Arabia uye Vatungamiriri venyika Tourism vanonzwisisa izvi. FII iri kuuya svondo rinouya, uye maziso epasirese ari paRiyadh.
Iyo Ramangwana reInvestment Initiative (FII) yave kuda kusangana muRiyadh. Tourism panguva ino ichave nechikamu chakakura mukukurukurirana nevatungamiriri venyika dzekushanya.
The World Tourism Network Hutano husina Border chirongwa inoyeuchidza Saudi Arabia nenhume dzayo kubva kupote nyika kuti kushanya hakuzoshanda kusvikira isu tese takachengeteka.
Kuwana mushonga wekudzivirira hakuna kuenzana pasirese. Nepo dzimwe nyika dzakapfuma dziine majekiseni akawandisa, nyika dzisina rombo rakanaka dzinoshuvira kuti vagari vadzo vabaiwe majekiseni. Kubudirira kwenhema dzakawanda mukufamba uye kushanya.
Kubva muna Gumiguru 17, muUnited States, 65% yevagari vakagashira kanokwana kamwe pfuti yejekiseni reCOVID-1, vamwe vava kugamuchira 19 booster shot.
30% yevaAmerica vanoramba kubaiwa jekiseni. Hurumende iri kupa kurudziro kune avo vanoteerera kubvuma "kurudziro" uye panguva imwechete vachityisidzira avo vasingateerere zvirango, sekurasa mabasa kana kuwana maresitorendi.
MuSingapore, jekiseni rekudzivirira iri 80%, muChina 76%, muJapan 76%, Germany 68% ine huwandu hwevanhu hunoramba, Saudi Arabia 68%, UAE 95%, Israel 71%, uye India 50%, nepasi rose. avhareji izvozvi pa48%.
Zvino mamiriro acho ave kunetsa. Russia iine chete 35% yevagari vayo vakabaiwa, Bahamas 34%, South Africa 23%, Jamaica 19% uye avhareji mu Africa ingori 7.7%.
African Tourism Board, iri pasi pehutungamiriri hwaSachigaro Cuthbert Ncube, yakabatana nechirongwa cheWTN cheHealth Without Borders kubva panguva yekutanga chete. Saizvozvowo Dr. Taleb Rifai, aimbova Secretary General weUNWTO.
Kenya Tourism Secretary Najib Balala aive mumwe wevatungamiriri vekutanga vemu Africa vanotsigira chirongwa cheHealth Without Border neWTN. Iye zvino ndiye mushumiri wekutanga wemuAfrica achipindura kurudziro yeMutungamiri weUnited States Biden yekuzorodza patent yejekiseni reCOVID-19.
Iko hakuna kuramba mune nyika dzine yakaderera majekiseni ekudzivirira; pane kushupika kwekuwana madosi akakwana kuti uwane mushonga wacho kuvanhu. Iko kushomeka kwemari zviwanikwa kuchinjisa majekiseni zvakanyanya kune nyika dzakapfuma.
Vatungamiriri vezvekushanya vane pfungwa yepasirese, kusanganisira Gurukota Rezvekushanya, Bartlett anobva kuJamaica, vakabatsira pakubvuma chinzvimbo uye nebasa rinoitwa neSaudi Arabia semutambi wepasirese wepasirese.
Neiri kuuya FII muRiyadh, uye vatungamiriri vevashanyi vane chiuru mundiza izvozvi kuti vasvike kuSaudi Arabia nekupinda, Gurukota rakataura Bartlett anogona kutora chinzvimbo chakakosha semutungamiri wepasi rose muRiadh svondo rinouya. Kuenzana kwejekiseni kunogona kuve kumusoro kwepfungwa dzake, tichifunga nezveJamaica Tourism yakanyanya kukanganiswa.
IWorld Tourism Network, pasi pehutungamiriri hweMuvambi Juergen Steinmetz, yakazviziva izvi muhurukuro dzayo dzepasirese mumatanho ekutanga ndokutanga chirongwa Utano Pasina Miganhu kutanga kwegore rino kuyeuchidza nyika kuti hapana munhu achange akachengeteka kubva kuCOVID kudzamara munhu wese agarika.
Kumwe kufambira mberi kwave kuitwa asi zvinosuwisa kuti panguva ino mudenda, kusaenzana kwemishonga inoramba kuripo, kunyangwe paine mishonga inodarika mabhiriyoni matanhatu yemajekiseni akagoverwa pasi rese. Ruzhinji rweaya ari munyika dzinowana mari zhinji asi nyika dzine hurombo zvakanyanya pasi pegumi muzana yevagari vevanhu vakabayiwa nhomba.
Gurukota rezvekushanya muJamaica, Hon. Edmund Bartlett, uyo akawanawo zita rekuti a Global Tourism Gamba, anoziva izvi uye akayeuchidza eTurboNews kusaenzana kwejekiseni kunogona kutadzisa kupora kwepasirese.
Mumusangano weKomiti Yezvekushanya (CITUR), Bartlett akazivisa nezvemaitiro ehurumende yeJamaica uye kuyedza kudzikisira kukanganiswa kwedenda iri munharaunda yekushanya.
apo Nyika Yekushanya inodaidza 911, Humambo hweSaudi Arabia hwavepo kupindura nekubatsira. Mabhiriyoni emadhora akapihwa kuti aiswe mubazi, kwete muKSA chete asi pasirese. Gurukota rezvekushanya muSaudi, Anokudzwa VaAhmed Aqeel Al-Khateeb, vakahaya vaimbova CEO weWTTC uye Gurukota rezveKushanya kuMexico, Gloria Guevara, semutevedzeri wake mukuru. Gloria anonzwisisa geopolitics uye anonyatsoziva nemamiriro ezvinhu mune zvehupfumi-zvinoenderana nehupfumi, seCaribbean.
Saudi Arabia ichiri kuyedza kuunza UNWTO dzimbahwe kubva kuMadrid kuenda kuRiyadh. Kufunga kwakadaro kune iyo UNWTO General Assembly kuMorocco kunogona kuendeswa. Pachishoma, Saudi Arabia yakanga yasvika kuSpain, iyo yazvino UNWTO inomirira nyika, kuti vagone kushanda pamwe chete nekudzosa hutungamiriri zvakare muvakaremara World Tourism Organisation.
Inouya future Investment Institute iri kugadzirira kusangana muRiyadh svondo rinouya. Ministry yeSaudi yekushanya yakakoka mazana evatungamiriri vevashanyi kuti vave chikamu chemusangano uyu.
Iko kusaenzana mukubaiwa kwepasi rose kune njodzi mukuvhurazve kufambira mberi kwechikamu, kusimudzira basa, uye kubudirira.
Vafambi vanochengetwa vanogona kusarudza nzvimbo yekuenda uko vashandi vemuhotera nevamwe vashandi vekushanya vanobaiwawo. Izvozvowo zvinoenda neimwe nzira kutenderera. Vashandi vemuhotera vanoda kuve nechokwadi chekuti vakachengeteka uye vakabaiwa majekiseni. Ivo havadi kuyanana nevashanyi vekunze kana vasina kuvharwa.
Kana nekuda kwezvikonzero zvemari nyika isina zviwanikwa uye mukana wekuwana mushonga, aya ndiwo mamiriro enharaunda yepasirese yekushanya inogona kuungana pamwe nekubatsirana pane. Saudi Arabia inogona kutamba chinzvimbo chayo semutungamiri achangogadzwa wepasirese aine pfungwa dzakavhurika uye nyowani, kufambisa uye kuwedzera mari kune danho rakadai. Saudi Arabia yaizobuda segamba repasirese kana ikabudirira.
Kuisa mari kwakadai pakuwana zvakaenzana majekiseni kwaigona kuve nemubhadharo wakakura weSaudi Arabia nepakati.
Musangano weFII uri, nekudaro, uchiwedzera kuve unokosha nezuva.